Izingxenye Zokuhlwaya - Shenzhen PhiliFast Electron Limited
I-PHILIFAST inikela ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme zomkhiqizo wezinsimbi ze-BOM, inezinhlaka zokuphakela ezihlelekile nezisebenza kahle, futhi ibona ukuhlangana okungabizi kakhulu kwe-PCB kumakhasimende.
Sineqembu lobuchwepheshe lobunjiniyela be-BOM lokubuyekeza idatha yangempela ye-BOM yamakhasimende.
Ithimba lineminyaka eminingi yesipiliyoni ekuhlonzweni kwengxenye ye-elekthronikhi, ukuhlolwa kokupakisha kwe-PCB, njll, futhi bangathola izinkinga zento ku-BOM yasekuqaleni kusengaphambili.
Isibonelo, noma ngabe imodeli yengxenye iphelele, noma ngabe iphakethe lezinto lifana nephedi ye-PCB, noma ngabe inombolo yengxenye icacile, njll., Sizozama konke okusemandleni ethu ukukusiza ukuqeda noma yiziphi izinkinga zento ngaphambi kokufaka i-oda.
Ukuze kuqinisekiswe ukuthi imodeli yengxenye ngayinye yamathegi ku-BOM icacile, ngasikhathi sinye, sizosebenzisa ngokusobala uhlobo lwento leyo, futhi ngeke sisebenzise ezinye izinto ezingaziwa ngaphandle kwemvume yekhasimende.
Ezingxenyeni ezingabaluleki kakhulu, sizohlinzeka ngezinto zokwengeza ezizenyekayo zokubhekiswa kwamakhasimende ukunciphisa izindleko zamakhasimende.
I-PHILIFAST ithenga izinto zoqobo ze-elekthronikhi kubaphakeli abasezingeni eliphakeme nakubasabalalisi bomhlaba wonke ukuqinisekisa isipiliyoni somhlangano we-PCB esezingeni eliphakeme.
Inkampani yethu isungule ukubambisana kwesikhathi eside nabasabalalisi bezinto ezinkulu ze-elekthronikhi, kufaka phakathi i-Arrow Electronics, i-Avnet, iDigi- Key Electronics, iFarnell Company, i-Future Electronics, iMouser Electronics, iNewark neSamtec.
Ukuthengwa kwento kuyisihluthulelo sempumelelo yephrojekthi. Ikhwalithi yanoma iyiphi into eyodwa izothinta ukusebenza kwawo wonke umkhiqizo we-PCB. Uchungechunge oluphelele lokuphakelwa kwezinto. kusisiza kuphela ukuthenga izinto eziyivelakancane emakethe, kodwa futhi kuqinisekisa ukulethwa okunembile.
Ukusiza ukunciphisa izindleko zezinto nokunciphisa isikhathi sokuhola, sihlala sigcina izinto ezingaphezu kwezingu-8000 + ezivela kubakhiqizi bekhwalithi. Siqinisekisa izingxenye zethu futhi sikukhuthaza ukuthi ukhethe esitokweni sethu.
Okokuvikela okuvamile, ama-capacitors, ama-diode, njll. Inkampani yethu inendawo ethile yokubhuka yokubhekana nokulahleka okubangelwe yilezi zinto kwinqubo yokukhiqiza, futhi igweme ukubambezeleka kokulethwa okubangelwa ukulahleka kwento.